Zimbabwe declares state of emergency over cholera outbreak | Info Israel
CNN: Zimbabwe declares state of emergency over cholera outbreak
2018-09-12 (165 Days Old)Total Views: 81 | Last 7 Days: 6
Zimbabwe's government has declared a state of emergency in the capital Harare after 20 people died of cholera.
Cholera claims 18 lives in Zimbabwe: official. At least 18 people have died over the past week in the Zimbabwe capital Harare and scores fallen ill after a cholera and typhoid outbreak in some areas,... >>
Cholera outbreak kills 10 people in Zimbabwe. A cholera outbreak has killed 10 people in Zimbabwe's capital Harare after they drank contaminated water, a city health official said on Sunday. >>
Zimbabwe declares cholera emergency following 20 deaths. Zimbabwe's government has declared a state of emergency in the capital Harare after 20 people of cholera. >>
Zimbabwe declares cholera emergency in capital after death toll rises to 20. Zimbabwe has declared a cholera outbreak in the capital Harare after the death toll rose to 20 and more than 2,000 people were infected after drinking contaminated water, new Health Minister Obadiah Moyo said on Tuesday. >>
Zimbabwe declares cholera emergency in capital after.... HARARE, Sept 11 (Reuters) - Zimbabwe has declared a cholera outbreak in the capital Harare after the death toll rose to 20 and more than 2,000 people were... >>
Zimbabwe declares cholera outbreak after 20 deaths. HARARE, Zimbabwe (AP) - Zimbabwe's health minister says a cholera emergency has been declared in the capital after 20 people have died.The deaths in Harare... >>
Zimbabwe Declares Emergency as Cholera Spreads in Capital. More than 2,000 people have been afflicted in the past week, and at least 20 have died. The health minister said blocked sewers in Harare were to blame. >>
Zimbabwe opposition leader plans 'inauguration'. HARARE, Zimbabwe (AP) - Zimbabwe opposition leader Nelson Chamisa is planning his own "inauguration" Saturday after losing disputed elections, but his... >>
Zimbabwe opposition leader plans ‘inauguration’. Zimbabwe opposition leader plans ‘inauguration’ after losing disputed election >>
Zimbabwe opposition leader plans mock inauguration in challenge to president. Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa may take a mock presidential oath on Saturday, his spokesman said, three weeks after President Emmerson Mnangagwa was inaugurated following a court decision upholding his disputed election victory. >>
Zimbabwe opposition leader plans mock inauguration in.... HARARE, Sept 11 (Reuters) - Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa may take a mock presidential oath on Saturday, his spokesman said, three weeks... >>
Zimbabwe opposition to declare Chamisa 'president'. Zimbabwe's main opposition party will this week hold a mock inauguration to name its leader Nelson Chamisa as the country's president, highlighting its... >>
Zimbabwe police ban public gatherings in capital to contain cholera outbreak. Zimbabwe's police on Wednesday issued a ban on all public gatherings to control the spread of cholera, which has killed 21 people in the capital Harare, a day after the government declared an emergency following the outbreak of the disease. >>
Zimbabwe police ban public gatherings in capital to.... HARARE, Sept 12 (Reuters) - Zimbabwe's police on Wednesday issued a ban on all public gatherings to control the spread of cholera, which has killed 21... >>
Zimbabwe seeks return to dollar as new govt sworn in. Zimbabwe's newly sworn-in finance minister on Monday said he planned to reintroduce the Zimbabwe dollar and accelerate plans to repay the country's debt, in... >>